मेरो ला’सको मलामी तिमि हुनु भन्दै २३ वर्षीया एलिसा गौतमले संसारबाट बिदा भइन – Khabar Silo
दाङ । दाङ तुलसीपुरकी एक युवतीले बुधबार मध्यराति फेसबुकमा लाइभ भिडियो दखाउदै ज्यान फालेकी छन् । ज्यान फाल्नेमा गर्नेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ रानीजरुवाकी २३ वर्षीया एलिसा गौतम रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाको खबर पाएसँगै प्रहरी गौतमको घर पुगेको थियो । तर, प्रहरी पुग्नु भन्दा अघि नै उनको निधन भइसकेको प्रहरीले जनायो । गौतमका घरका ससदस्य भने सबै भारत गएका छन् ।
युवतीले किन यसो गरिन् भन्ने खुलेको छैन । मृतक युवतीको शव पोष्टमार्टमका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुल्सीपुरमा राखिएको छ । घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनले यस्तो गर्नु पुर्व एउटा गित बजाएकी थिइन् । सम्झना बिर्सना यो सिउँदो जोगाउनु, मेरो ला’सको मलामी तिमि हुनु भन्दै उनले संसारबाट बिदा लिएकी हुन् । तस्विर तल हेर्नुहोस :
Posted on July 30, 2021 July 30, 2021 Author khabar silo
Posted on December 10, 2020 Author khabar silo
लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रेणीमा केहिदिन अगाडि प्रसारण भएको भागको छोटो अंश यतिबेला टिकटक र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।भाइरल भिडियोमा गायिका टीका सानू र कृष्ण कंडेलको छोटो संवाद सुन्न सकिन्छ । यसैबिषयमा टीका सानूले फेसबुकबाट यस्तो स्पष्टीकरण दिएका छन् । सबैमा नमस्कार। नचाहँदा नचाहँदै पनि केही कुरा लेख्नै पर्ने भयो। कार्यक्रम इन्द्रेणीसँग प्राय व्यक्तिहरु परिचित […]
बाजीमा लुडो खेल्ने ७ जना प्रहरीको फन्दामा
Posted on July 26, 2020 Author khabar silo
काठमाडौं – के तपाईं साथीभाइसँग बसेर लुडो खेल्दै हुनुहुन्छ ? यति त्यसो हो भने सावधान ! लुडो खेल्दै गरेको भेटेमा तपाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्छ । अहिले प्रहरीले लुडो खेल्नेलाई पक्राउ गर्न थालेको छ । आइतबार मात्र महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीको टोलीले काठमाडौंको सुनारगाउँबाट बाजीमा लुडो खेलिरहेको अवस्थामा ७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । वृत्तका […]